रेशमबहादुर थापा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनका सचिव एवं गण्डकी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । २०५१ साल पौष १ गते कैलाश विकास बैंक (साविकको अन्नपूर्ण फाइनान्स) बाट बैंकिङ करियर शुरु गरेका थापाले दुई दशकभन्दा बढी बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरिसकेका छन् । २०५९ फागुन १५ सम्म त्यहि संस्थाको उच्च तहको पदमा रहेर काम गरेका थापालाई सोहि बखतमा फेवा फाइनान्सको नेतृत्व तहमा काम गर्ने प्रस्ताव आयो । लामो समय अनुभव भएका कारण आएको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै थापा तत्कालिन फेवा फाइनान्सको म्यानेजिङ डाइरेक्टरमा नियुक्त भए ।
२०५९ चैत्र १५ गतेदेखि म्यानेजिङ डाइरेक्टरको रुपमा काम गरेका थापाले २०६४ पौष मसान्तमा कार्यकालय पुरा गरी ओम डेभलपमेन्ट बैंक (तत्कालिन ओम फाइनान्स) मा जनरल म्यानेजर भएर काम गरे । उनी १९ महिना ओम फाइनान्समा काम गरी पुनः फेवा फाइनान्सको सीइओको रुपमा गएका थिए । साविकको फेवा फाइनान्स र विश्व विकास बैंक मर्जर भएर फेवा विकास बैंक साथै फेवा विकास बैंक र गण्डकी विकास बैंक मर्ज भएर गण्डकी विकास बैंक बन्दा समेत थापा सीइओको रुपमा नै कार्यरत छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका थापासँग विकास बैंकहरुको पछिल्लो गतिविधि, पोखरामा बैंकिङ सेवाको अवस्था लगायतका विषयमा बैंकिङ खबर डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छः
गण्डकी विकास बैंकको पछिल्लो वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?
गण्डकी विकास बैंक पूँजीको हिसाबले सबल छ । शाखा सञ्जाल, सुशासन लगायत अन्य पार्टबाट समेत सफल भएको हामीले महशुस गरेका छौँ । दोस्रो त्रैमास सम्मको गण्डकीको वित्तीय विवरण हेर्ने हो भने १९ अर्ब ९२ करोड निक्षेप संकलन र १७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम कर्जा प्रवाह गरेको थियो । हाल तेस्रो त्रैमास सकिनै लागेको हुँदा त्यो फिगर बढेको छ ।
शाखा सञ्जालको अवस्था कस्तो छ ?
नेटवर्क कभरेजको हिसाबले हामी विकास बैंककै सबैभन्दा उत्कृष्ट हुने योजनाका साथ अघि बढेका छौँ । अहिले वर्तमान अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने पनि पूर्व मेचीको झापादेखि पश्चिम महाकालीको महेन्द्रनगरबाट समेत सेवा दिँदै आएका छौँ । अहिले हाम्रो ५१ वटा शाखा कार्यालयहरु रहेका छन् । ८ वटा शाखा कार्यालयहरु वैशाख महिनाभित्रमा सञ्चालनमा ल्याउदै छौँ भने थप १२ वटा शाखा कार्यालयहरु चालु आर्थिक वर्षकोे असार मसान्तभित्रमा थप गर्दैछौँ । यो आर्थिक वर्षमा २० वटा शाखा कार्यालयहरु थप गरी शाखा संख्या ७१ पुर्याउने त्यसका अलवा आगामी आर्थिक वर्षमा समेत आवश्यकता अनुसार शाखा कार्यालयहरु स्थापना गर्दै जाने हाम्रो योजना छ ।
मर्जरपछि बैंकहरुमा धेरै समस्याहरु आउछन् भनिन्छ, दुई ठूला विकास बैंकहरु मर्ज भएर गण्डकी विकास बैंक बनाउनु भएको छ । के–कस्ता समस्या झेल्नु पर्यो ?
दुई ठूला विकास बैंकहरु मर्जर भएर बनेको गण्डकीको सबैभन्दा राम्रो पक्ष एचआर म्यानेजमेन्ट हो । पहिले फेवा फाइनान्स र विश्व विकास बैंक मर्ज भएर फेवा विकास बैंक भयो, फेरी फेवा विकास बैंक र गण्डकी विकास बैंक मर्ज भएर गण्डकी विकास बैंक बनेको हो । हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा मर्जरपछि कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या विकराल हुन्छ । तर हाम्रोमा यो छैन ।
2018-04-02 - 760 view(s) - bankingkhabar